४० पछि व्यवसाय थालेर सफल बनेका १० उद्यमी
जीवनमा उमेर छँदै उद्यम–व्यवसाय गर्ने इच्छा धेरैको हुन्छ । यद्यपि बाध्यता, परिस्थितिलगायत कारण सबैलाई यो सम्भव हुँदैन । तर संयोग यस्तो बनिदिन्छ, प्रौढावस्थापछि पनि मानिस उद्यम शुरू गर्न पुग्छन् । र, त्यसमा सफलसमेत हुन्छन् । काउफमान फाउण्डेशनको एउटा तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने हालैका वर्षमा पहिलो व्यव...
एमजनमा रोजगारी ? कर्मचारी भर्नामा सोधिने तीन प्रश्न
विश्वमा कामका लागि सबैभन्दा धेरै खोजिने कम्पनीमध्ये पर्छ अमेरिकी अनलाइन खुद्रा कम्पनी एमजन । अहिले यसले विश्वभर ५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ । शुरुआती दिनमा कम्पनीको मुख्य कार्यालय संस्थापक तथा सीईओ जेफ बेजोसको ग्यारेजबाट सियाटलको एक घरमा सर्दा निकै थोरै कर्मचारी थिए । सन् १९९५ मा एमजन...
के तपाईको कम्पनीमा कर्मचारी टिक्दैनन् ? पेप्सीले प्रयोग गरेको ‘लोकेशन फ्रि’ पोष्टले पो टिकाउँछ की !
भदौै २६, नयाँ दिल्ली (भारत) । कम्पनीमा कर्मचारीहरु लामो समयसम्म नटिक्ने, प्रतिभाशाली कर्मचारीलाई टिकाउनै गाह्रो हुने र भनेजस्तो कर्मचारी नपाउने समस्या अहिले जहिँतहिँ छ । चाहेजस्तो कर्मचारीहरुलाई टिकाउन कम्पनीहरुले अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । हल्का पेय उत्पादक कम्पनी पेप्सीकोले पनि यस्तै गरेको छ ।...
गाउँपालिकामा स्वरोजगार कार्यक्रम
राजेश जीसी प्यूठान । प्यूठानका ग्रामीण भेगका युवा विदेश पलायन हुन थालेपछि जिल्लाका ९ ओटै स्थानीय तहले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । ती स्थानीय तहले युवालाई गाउँमै रोजगारी दिलाउन लाखौं बजेट विनियोजन गरेका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित कार्यक्रमम...
दक्ष बन्ने केही काइदा
शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव मात्र सबथोक होइन । धेरैले शैक्षिक योग्यता र अनुभवको आधारमा राम्रो रोजगारी खोजी गर्छन् र पाउँछन् पनि । तर, समय परिवर्तनशील छ र प्रविधि र कार्यशैली पनि दिनप्रतिदिन बदलिँदो छ । त्यसैले, आफूलाई समय र परिवेशअनुरूप आफूलाई दक्ष र परिपक्व बनाउँदै लानु उत्तिकै आवश्यक छ । आफ्नो यो...
खुशी : सफलताको मापन
हरेक व्यक्तिको चाहना हो खुशी, धन सम्पत्ति र सफलता । हामीमध्ये कतिमा धनी हुने सपना छ । कोही खुशीको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । अनि कोही भने जे गरी हुन्छ, जसरी हुन्छ धनी सम्पत्ति जोड्ने दौडमा छन् । बिल गेट्स, वारेन बफेट र रिचार्ड ब्रान्सन विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्तिमध्ये पर्दछन् । कतिपयलाई यिनीहरूको जस्...
करीअर : इन्द्रा नुई को पेप्सीको सीईओ यात्रा
काठमाडौं । अमेरिकी हल्का पेय उत्पादक कम्पनी पेप्सीकोकी ६२ वर्षीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रा नुई अक्टोबरदेखि सीईओ पद छाड्दै छिन् । सन् २००६ मा कम्पनी प्रमुख बन्दा नुई अमेरिकाका ५ सय ठूला पब्लिक कम्पनीका १ दर्जनभन्दा कम महिला सीईओमध्ये एक थिइन् । अहिले ती कम्पनीमा करीब २ दर्जन महिला सीईओ छ...
जागीरका लागि दिएको आवेदन एक/दुईपटक अस्वीकृत हुँदा त्यति चित्त दुख्दैन । तर, लगातार एकपछि अर्को गरी दर्जनौं ठाउँमा जागीरका लागि दिएको आवेदन स्वीकार नहुँदा, अथक प्रयास गर्दा पनि काम नपाउँदाको क्षणमा कस्तो महसूस हुन्छ होला ! त्यस्तो स्थितिको सामना गर्न सहज हुँदैन । तर स्थिति जे जस्तो भए पनि हार आत्मसात...
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ८% घटे
काठमाडौं । रोजगारीको क्रममा विदेशिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ८ दशमलव २ प्रतिशत घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा गत आवको ११ महीनालाई समीक्षा गर्दा विदेशीने नेपाली कामदा...
वैदेशिक रोजगार र जान्नैपर्ने विषय
काठमाडौं । नुवाकोटका अनिल अधिकारी वैदेशिक रोजगारीमा जान यसरी तम्सिए कि उनले आफ्नो क्षमता र योग्यताको वास्तै गरेनन् । विदेशमा गएपछि सुनकै मान्छे भइन्छ कि भन्ने भ्रम पालेका अधिकारी जब उद्योगको पर्खालभित्र कैद भए, तब वास्तविकता थाहा पाए । हेभी गाडी चलाउने भनेर नक्कली लाइसेन्सको जोहो गर्दै कतार पुगेका अ...